လကျရှိဘဝအခွအေနကေနေ သငျ့ဘဝကို ပိုပွီး ထူးခွားတိုးတကျလာစမေယျ့ နညျးလမျး (၆)ခု - ONE DAILY MEDIA
နစေ့ဉျ ဖွတျသနျးနရေတဲ့ သငျ့ဘဝကွီးက ဘာမှ ထူးခွားမှု မရှိဘူးလို့ ခံစားနရေပါသလား?? တဈနေ့ တဈနေ့ စကျရုပျတဈရုပျလို ပုံမှနျ မလုပျမဖွဈ လုပျစရာရှိတာတှေ လုပျနပေမေယျ့ ဘာမှ တိုးတကျမှု မရှိဘူးလို့ ခံစားနရေတဲ့ နရေ့ကျတှကေို ပိုငျဆိုငျနပေါသလား။ ဒီလိုတှေ ခံစားနရေပမေယျ့ သငျက ဘဝမှာ တိုးတကျမှုကို လိုလားသလို တိုးတကျခငျြတဲ့သူဆိုရငျတော့ ဒီအခကျြတှကေို ပွုလုပျရငျး ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့ ဘဝဆီကို ဆကျတကျလှမျးသှားသငျ့ပါတယျ။
(၁) လလေ့ာမှုတှကေို မရပျတနျ့ပါနဲ့
ဘဝကို ပိုပိုပွီး တိုးတကျစခေငျြရငျတော့ မဖွဈမနေ လုပျရမှာက လလေ့ာမှုတှကေို အမွဲမပွတျ လုပျသငျ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လူတှအေကွောငျးတှကေိုလညျး လလေ့ာသငျ့သလို ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ပညာရပျတှကေိုလညျး တဈနထေ့ကျတဈနေ့ ပိုသိနားလညျလာတဲ့ သူတဈယောကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားအားထုတျရပါမယျ။ ဒါ့အပွငျ ခတျေမီနတေဲ့ ခတျေကွီးထဲမှာ ပညာရပျတှေ တတျကြှမျးရုံနဲ့ ဘဝကောငျးကောငျးတဈခုရဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပါဘူး။ ဘာသာစကားပိုငျးကိုလညျး မကြှမျးကငျြရငျတောငျ တတျမွောကျအောငျ လလေ့ာထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
(၂) စိတျကို ငွိမျအောငျထားပါ
စိတျတှေ အမွဲ ရှုပျထှေးနရေငျ ဘာမှ ကောငျးမှနျအောငျ တှေးတော့နိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ စိတျတညျငွိမျမှု မရှိရငျ ဘဝအတှကျ အထောကျအကူဖွဈမယျ့ လလေ့ာမှုတှေ လုပျရာမှာလညျး အာရုံစိုကျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဘဝ အောငျမွငျဖို့ ဆိုရငျ စိတျတညျငွိမျဖို့လညျး အမြားကွီး လိုအပျနပေါတယျ။
(၃) လူမှုရေးမှာ အရှုပျအရှငျး ကငျးအောငျနပေါ
လူဖွဈလာပွီမို့ လူမှုရေးတှကေတော့ ရှိနတောပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဘဝမှာ အောငျမွငျခငျြရငျတော့ ကွိုးစားရမယျ့အရာထဲမှာ လူမှုရေးမှာ ကောငျးမှနျခွငျးလညျး ပါဝငျနပေါတယျ။ လူမှုရေးမှာ အရှုပျအရှငျး ကငျးတဲ့အခါ မကောငျးသော သတငျးနဲ့ ကိုယျ့ကို တိုကျခိုကျဖကျြစီးခငျြတဲ့သူတှေ မလုပျနိုငျကွတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ အရှုပျအရှငျးရှိတဲ့သူက စိတျအာရုံတှေ ထှပွေားရပွီး လူမှုရေးကိစ်စတှကေိုလညျး မြားစှာ အာရုံစိုကျပွီး အခြိနျပေးရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့ဘဝရဖို့ ကွိုးစားရမယျ့ လလေ့ာရမယျ့ အရာတှအေတှကျ အာရုံစိုကျပွီး အခြိနျပေးရမှာတှမှော လြော့ရဲသှားတာကွောငျ့ အောငျမွငျတဲ့ဘဝကို ရဖို့မှာ အခကျအခဲတှေ ရှိသှားနိုငျပါတယျ။
(၄) အခှငျ့အလမျးတှကေို အမွဲစောငျ့ကွညျ့နပေါ
အောငျမွငျတယျဆိုတာ တဈနရောတညျးမှာ ရပျနပွေီး အောငျမွငျသှားကွတာ မဟုတျပါဘူး။ အခုထကျ ပိုကောငျးတဲ့အခွအေနကေို လိုခငျြရငျတော့ အခုထကျပိုကောငျးတဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ရဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ အခှငျ့အရေးဆိုတာ ကိုယျ့မှာ လကျရှိအခွအေနထေကျ ပိုပွီး သာလှနျနတေဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ရှိနမှေ ရှေးခယျြလို့ ရတာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ဆီ ရောကျလာမယျ့ အခှငျ့အရေးကို အမွဲ စောငျ့ကွညျ့နရေမှာ ဖွဈသလို အခှငျ့အရေးကို ဖမျးဆုပျနိုငျတဲ့ အရညျအခငျြးတှလေညျး ဖွညျ့ထားရမှာ ဖွဈပါတယျ။
(၅) ပိုကောငျးမယျ့ အခှငျ့အရေးကိုပဲ အမွဲရှေးပါ
ကိုယျ့မှာ အခုအခွအေနထေကျ ပိုပွီး သာတဲ့ အရညျအခငျြးတှေ ရှိလာတဲ့အခါ ကိုယျ့အတှကျ ရှေးခယျြလို့ ရမယျ့ အခှငျ့အလမျးတှကေ ရှိလာမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ဘယျလို အခှငျ့အရေးတှကေ ကိုယျ့ကို ပိုအကြိုးရှိစပွေီး ကိုယျ့အတှကျ သငျ့လြျောမှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ရှေးခယျြဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျ အခှငျ့အရေးကောငျး ဖွဈနပေမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ တခွားကိစ်စကို ပွနျထိခိုကျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးတှလေညျး ရှိနတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခှငျ့အရေးကောငျးဆိုတာ ကိုယျ့ကို ဘာအတှကျမှ မထိခိုကျစပေဲ တိုးတကျမှုကို ဖွဈစတေဲ့အရာ ဖွဈနဖေို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလို အခှငျ့အရေးမြိုးကိုလညျး ရှေးတတျဖို့ လိုပါတယျ။
(၆) ငှစေုပါ ( ခြှတောသုံးစှဲတတျပါစေ)
ငှကွေေးနဲ့ ဖလှယျပွီး လညျပတျနတေဲ့ လောက ဖွဈတဲ့ အတှကျ ဘဝမှာ ငှကွေေးရှိမှုကလညျး အရေးပါနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တိုးတကျမှုကို လိုခငျြရငျ ရငျးနှီးမွှပျနှံရမယျ့ အထဲမှာ ငှကွေေးလညျး ပါဝငျပါတယျ။ တဈခြို့သော လလေ့ာမှုတှအေတှကျ ငှကွေေးက ပါဝငျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုထကျ ပိုသာတဲ့ဘဝကိုသှားခငျြရငျ ငှကွေေးဖွုနျးတီးမှု မရှိဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ ငှကေို မလိုအပျတာတှပေဲ မသုံးပဲ စုဆောငျးထားသငျ့ပါတယျ။ စုဆောငျးထားတဲ့ ငှကွေေးတှကေို အခုထကျ ပိုသာတဲ့ဘဝကို သှားဖို့ လှကေားထဈတှအေဖွဈ အသုံးခဖြို့ လိုအပျပါတယျ။
လက်ရှိဘဝအခြေအနေကနေ သင့်ဘဝကို ပိုပြီး ထူးခြားတိုးတက်လာစေမယ့် နည်းလမ်း(၆)ခု
နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ သင့်ဘဝကြီးက ဘာမှ ထူးခြားမှု မရှိဘူးလို့ ခံစားနေရပါသလား??
တစ်နေ့ တစ်နေ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လို ပုံမှန် မလုပ်မဖြစ် လုပ်စရာရှိတာတွေ လုပ်နေပေမယ့် ဘာမှ တိုးတက်မှု မရှိဘူးလို့ ခံစားနေရတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေပါသလား။ ဒီလိုတွေ ခံစားနေရပေမယ့် သင်က ဘဝမှာ တိုးတက်မှုကို လိုလားသလို တိုးတက်ချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီအချက်တွေကို ပြုလုပ်ရင်း ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဘဝဆီကို ဆက်တက်လှမ်းသွားသင့်ပါတယ်။
(၁) လေ့လာမှုတွေကို မရပ်တန့်ပါနဲ့
ဘဝကို ပိုပိုပြီး တိုးတက်စေချင်ရင်တော့ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမှာက လေ့လာမှုတွေကို အမြဲမပြတ် လုပ်သင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအကြောင်းတွေကိုလည်း လေ့လာသင့်သလို ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကိုလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုသိနားလည်လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ခေတ်မီနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ပညာရပ်တွေ တတ်ကျွမ်းရုံနဲ့ ဘဝကောင်းကောင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဘာသာစကားပိုင်းကိုလည်း မကျွမ်းကျင်ရင်တောင် တတ်မြောက်အောင် လေ့လာထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၂) စိတ်ကို ငြိမ်အောင်ထားပါ
စိတ်တွေ အမြဲ ရှုပ်ထွေးနေရင် ဘာမှ ကောင်းမွန်အောင် တွေးတော့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် စိတ်တည်ငြိမ်မှု မရှိရင် ဘဝအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် လေ့လာမှုတွေ လုပ်ရာမှာလည်း အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘဝ အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရင် စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့လည်း အများကြီး လိုအပ်နေပါတယ်။
(၃) လူမှုရေးမှာ အရှုပ်အရှင်း ကင်းအောင်နေပါ
လူဖြစ်လာပြီမို့ လူမှုရေးတွေကတော့ ရှိနေတာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ ကြိုးစားရမယ့်အရာထဲမှာ လူမှုရေးမှာ ကောင်းမွန်ခြင်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ လူမှုရေးမှာ အရှုပ်အရှင်း ကင်းတဲ့အခါ မကောင်းသော သတင်းနဲ့ ကိုယ့်ကို တိုက်ခိုက်ဖျက်စီးချင်တဲ့သူတွေ မလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အရှုပ်အရှင်းရှိတဲ့သူက စိတ်အာရုံတွေ ထွေပြားရပြီး လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုလည်း များစွာ အာရုံစိုက်ပြီး အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝရဖို့ ကြိုးစားရမယ့် လေ့လာရမယ့် အရာတွေအတွက် အာရုံစိုက်ပြီး အချိန်ပေးရမှာတွေမှာ လျော့ရဲသွားတာကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ဘဝကို ရဖို့မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိသွားနိုင်ပါတယ်။
(၄) အခွင့်အလမ်းတွေကို အမြဲ စောင့်ကြည့်နေပါ
အောင်မြင်တယ်ဆိုတာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရပ်နေပြီး အောင်မြင်သွားကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုထက် ပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေကို လိုချင်ရင်တော့ အခုထက်ပိုကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ကိုယ့်မှာ လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုပြီး သာလွန်နေတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေမှ ရွေးချယ်လို့ ရတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဆီ ရောက်လာမယ့် အခွင့်အရေးကို အမြဲ စောင့်ကြည့်နေရမှာ ဖြစ်သလို အခွင့်အရေးကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေလည်း ဖြည့်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ပိုကောင်းမယ့် အခွင့်အရေးကိုပဲ အမြဲ ရွေးပါ
ကိုယ့်မှာ အခုအခြေအနေထက် ပိုပြီး သာတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွက် ရွေးချယ်လို့ ရမယ့် အခွင့်အလမ်းတွေက ရှိလာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို အခွင့်အရေးတွေက ကိုယ့်ကို ပိုအကျိုးရှိစေပြီး ကိုယ့်အတွက် သင့်လျော်မှာလဲ ဆိုတာကိုတော့ ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အရေးကောင်း ဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ တခြားကိစ္စကို ပြန်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကို ဘာအတွက်မှ မထိခိုက်စေပဲ တိုးတက်မှုကို ဖြစ်စေတဲ့အရာ ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကိုလည်း ရွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၆) ငွေစုပါ ( ချွေတာသုံးစွဲတတ်ပါစေ)
ငွေကြေးနဲ့ ဖလှယ်ပြီး လည်ပတ်နေတဲ့ လောက ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘဝမှာ ငွေကြေးရှိမှုကလည်း အရေးပါနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုးတက်မှုကို လိုချင်ရင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရမယ့် အထဲမှာ ငွေကြေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော လေ့လာမှုတွေအတွက် ငွေကြေးက ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုထက် ပိုသာတဲ့ဘဝကိုသွားချင်ရင် ငွေကြေးဖြုန်းတီးမှု မရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ငွေကို မလိုအပ်တာတွေပဲ မသုံးပဲ စုဆောင်းထားသင့်ပါတယ်။ စုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးတွေကို အခုထက် ပိုသာတဲ့ဘဝကို သွားဖို့ လှေကားထစ်တွေအဖြစ် အသုံးချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။